Ungakusebenzisa kanjani ukuphathwa kwezesayensi kwezemvelo? -Izindaba zezezimboni-i-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Ungakusebenzisa kanjani ukuphathwa kwezesayensi kwezemvelo?
Isikhathi: 2020-06-10 Hits: 47
Ukuvikelwa kwemvelo kubhekelelwa kakhulu ngabantu kanye nabantu abaningi. Ekuhleleni nasekwenziweni kokuvikela imvelo, kufanele sihlanganise iphuzu lokukhiqiza ngokubuka kwemvelo kanye nokuvikelwa kwemvelo, futhi sifune isu lokuphatha elinengqondo ngokuhlaziya okuhleliwe nokuqinisekisa.
Imigomo eyinhloko yokuphathwa kokuvikela imvelo ingafushaniswa ngale ndlela elandelayo:
(1) Susa imikhiqizo engenangqondo ekukhiqizeni;
Kweminye imikhiqizo yendabuko enenani eliphansi lokukhipha nobunzima obukhulu ekwelashweni kwamanzi amdaka, ingashintshwa ngemikhiqizo enenani eliphezulu lokukhipha nokuqukethwe kobuchwepheshe obuphakeme. Uma inzuzo yomkhiqizo othile ingaqhathaniswa nezindleko zokwelashwa kwamanzi amdaka, kufanelekile yini ukuqhubeka nokukhiqiza?
(2) Qinisa ukuphathwa futhi unciphise ukungcoliswa;
Ukuphathwa kwamabhizinisi nakho kuyisici esibalulekile ekuvimbeleni nasekulawuleni ukungcoliswa. Ukukhiqizwa kwamabhizinisi kuvame ukuhambisana nesizukulwane samanzi amaningi edoti. Uma ngabe amanzi angcolile angahlangabezani nezindinganiso akhishwa, lokho kuzodala umonakalo endaweni yemvelo. Ngakho-ke, amabhizinisi abaluleke kakhulu ekuphathweni kwendle.
(3) Sungula izitshalo ezincane zokwelapha indle;
Ngenxa yemikhiqizo ehlukahlukene ekhiqizwe yizimboni ezahlukahlukene, ikhwalithi yamanzi angcolile akhiqizwayo nayo yehlukile. Kunzima impela ukuphatha zonke izinhlobo zezinto eziyingozi ngokwahlukana, kepha uma amanzi amdaka emafektri ahlukahlukene ephathwa ngendlela enobumbano, hhayi kuphela ukuthi ubunzima bokwelashwa kwamanzi amdaka bungancishiswa, kepha futhi ukusebenza kahle kokulashwa kungathuthukiswa.
(4) Ukwenza ngcono izinga lokuphinda usebenzise amanzi;
Emazweni amaningi, izinga lokuphinda usebenzise amanzi lingaba liphezulu kakhulu, futhi kusenamathuba amaningi okusetshenziswa kwamanzi ezindaweni eziningi alinde abantu ukuthi badonsa. Ukukhuphula izinga lokuphinda usebenzise amanzi okukhiqiza ngeke kwehlise ukungcoliswa kwemvelo kuphela, kepha futhi kunganciphisa ukusetshenziswa kwamanzi amasha. Ngokwezinga elikhulu, lokhu kungadambisa inkinga ebhebhethekayo yemithombo yamanzi.
(5) Ukuphinda kusetshenziswe kabusha futhi kusetshenziswe ngokuphelele ukungcola;
Ukungcola emanzini amdaka konke kukhiqizwa ngenkathi kwenziwa inqubo yokukhiqiza, futhi inqubo yokuhlukanisa izinto ezahlukahlukene ayikwazi ukubakhona kahle, ngakho-ke amanzi angcolile nawo aqukethe inani lezinto ezithile ezilusizo.
Uma lezi zinto zikhishwa, zizongcolisa imvelo futhi zilimaze imvelo. Kepha uma isetshenziswa kabusha noma isetshenziswe ngokuphelele, ingashintsha imfucuza ibe yingcebo futhi iguqule ukulimala kube yinzuzo. Ukucabanga kusuka kwelinye iphuzu lokubuka, imfucuza ingaphathwa imfucuza, futhi namandla anganxephezelwa, ukuze izindleko zokulashwa kwamanzi zisindiswe.
Okwedlule: Izinhlayiya ze-Colloidal, okungekho lula ukuzixazulula ngokwemvelo emanzini amdaka.
Okulandelayo: Kungani ukwelashwa kwamanzi amdaka kubaluleke kangaka?